———၊ (သွားနှင့် ခံတွင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး) ၊——— Q. ခံတွင်းသန့်စင်တဲ့အခါ သုံးသင့်တဲ့ သွားတိုက်တံအကြောင်းကိုလည်း သိပါရစေဆရာ။ A. တစ်ကမ္ဘာလုံးသုံးနေတဲ့ ခံတွင်းသန့်စင်နည်းက သွားတိုက်တံနဲ့ သွားတိုက်ဆေးသုံးပြီး သွားတိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားတိုက်တံကလည်း အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံ(Electric Toothbrush)နဲ့...
ဒေါက်တာထွန်းထွန်းလင်း (သွားနှင့် ခံတွင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကာလ အပိုင်းအခြား ၃ ပိုင်း ရှိပါတယ်။ ပထမသုံးလပတ်ကာလ (ကိုယ်ဝန် ၁မှ ၁၂ပတ်၊ ဒုတိယသုံးလပတ်ကာလ (ကိုယ်ဝန် ၁၃ မှ၂၄ ပတ်)၊ တတိယသုံးလပတ်ကာလ (ကိုယ်ဝန် ၂၅ မှ...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သွားနဲ့ခံတွင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သွားဆရာဝန်တွေက သင့်ကိုသိစေလိုတဲ့ အချက်တွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ (၁) လူတွေက သင့်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် စတွေ့တဲ့အခါ အရင်ဆုံး သူတို့သတိထားမိတာက သင်ရဲ့မျက်လုံးတွေဖြစ်ပြီး ဒုတိယအနေနဲ့ သတိထားမိတာက သင့်သွားတွေပါပဲ။ တတိယအနေနဲ့ကျမှ...
(၁) အံကပ်တပ်ဆင်သူတွေအနေနဲ့ အစာစားပြီးတိုင်း အံကပ်ကိုဖြုတ်ပြီး ရေနဲ့ဆေးကြောပေးပါ။ (၂) ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း အံကပ်ကိုဖြုတ်ပြီး သွားတိုက်ဆေး ဒါမှမဟုတ် ဆပ်ပြာနဲ့တိုက်ပြီး ရေနဲ့ သေချာဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါ။ ပြီးရင် အံကပ်ကို ရေထဲစိမ်ပါ။ ရိုးရိုးရေထဲစိမ်ပြီး အဖုံးဖုံးထားပေးပါ။ (၃) နံနက်အိပ်ရာထပြီး ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး လုပ်ဆောင်ပြီးချိန်မှာ...
၊ မီမိုးမေ ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သွားလေးတွေဖြူနေရင် နုပျိုကြည့်ကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိစေတာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သွားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ အဖြူစက်လေးတွေကွက်ပြီး ထင်နေတာက သွားကြွေလွှာအားနည်းတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ သွားပေါ်မှာ အဖြူစက်လေးတွေထင်တဲ့အခါ သက်သာစေမယ့် သဘာဝနည်းတွေကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ သဘာဝကုထုံး (၁)...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သင်ရဲ့ခံတွင်းဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အသုံးဝင်ဆုံး အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းထဲက တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ရှူတာ၊ စကားပြောတာ၊ အစာစားတာ၊ ပြုံးတာ၊ နှုတ်ခမ်းစူတာ၊ သီချင်းဆိုတာ၊ ရယ်မောတာတွေအားလုံးကို ခံတွင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်နေလို့ပါ။ ခံတွင်းသန့်ရှင်းကျန်းမာနေရင် အသက်ကြီးလာပေမယ့် ပါးပြင်တွေ ပြည့်တင်းနေပြီး...
သွားနှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သထက် ကောင်းမွန်လာစေရန်
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ခံတွင်းထဲမှာ သွားတွေညီညီညာညာ၊ ဖြူဖြူစင်စင်ရှိနေမှသာ အပြုံးလှလှ ပြုံးနိုင်မှာပါ။ အသက်ကြီးတဲ့အထိ သွား တွေမဆုံးရှုံးဘဲ အပြုံးလှလှပြုံးနိုင်ဖို့အတွက်လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ – သွားဖြူစင်တောက်ပလိုလျှင် နေ့စဉ်သွားတိုက်ပေးရုံနဲ့ သွားဖြူစင်တောက်ပဖို့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။သွားတိုက်တံကို ရှလကာရည်ပန်းကန်လုံးထဲစိမ်ပြီး သွားတိုက်သလိုတိုက်ပေးပါ။ တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်ပဲလုပ်ပါ။နောက်တစ်နည်းက...
သွားဖုံးရောဂါကင်းဝေးစေရန် အထူးကုဆရာဝန်တို့၏ အကြံပြုချက်များ
သွားဖုံးရောဂါကို ပေါ့ပေါ့ဆဆ သဘောမထားသင့်ပါ။ သွားဖုံးရောဂါဖြစ်လာတာကို လျစ်လျူရှုထားပါကဖြစ်လာနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေက များပြားလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွားဖုံးရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူဆရာဝန်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ သွားဖုံးအထူးကုဆရာဝန်၏ အကြံပြုချက် သွားဖုံးရောဂါဟာ နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ စတာတွေရဲ့ဖြစ်နှုန်းကို မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။...